Iyo itsva vhezheni yeQ4OS 3.8 inosvika yakavakirwa paDebian 10 uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura iyo vanogadzira kuseri kweprojekti yekuparadzira yeQ4OS Linux, vakaburitsa vhezheni itsva yeQ4OS 3.8, ndeipi imwe yemanyowani ayo makuru ndeyekuti inoita shanduko kuenda kuDebian 10 uyezve nekugadziridzwa kwenzvimbo dzayo dze desktop.
Kune avo vachiri kusaziva nezve Q4OS, vanofanirwa kuziva izvozvo uku ndiko kugoverwa kwegermani linux kunoenderana nedebian open source ine yakajeka uye inoshandisa-inoshamwaridzika interface newbie, ichipa nzvimbo yedesktop inonzi Trinity, inozivikanwawo seTDE Desktop Desktop Nzvimbo, yakafanana neiyo yeWindows XP uye Windows 7 zvakananga. Inotarisa mukugadzikana kwenguva refu, chengetedzo, kumhanya, uye kuvimbika.
1 Main nyowani maficha eQ4OS 3.8
1.1 Yakagadziridzwa Q4OS desktops
1.2 Utatu desktop 14.0.6
2 Dhawunirodha Q4OS 3.8
Main nyowani maficha eQ4OS 3.8
Iyo itsva vhezheni yakaunza shanduko kune iyo Debian 10 "Buster" package dhatabhesi. pamwe nezvose zvayakapihwa zvinowedzera izvo zvinouya pamwe zvirinani Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) rutsigiro.
Zvakaren inouya nekuchengetedzwa kwakachengetedzwa. AppArmor, inosungirwa kuwana (MAC) sisitimu yekumisa kugona kwezvirongwa nekutsanangura profiles pachirongwa, ikozvino inogoneswa nekutadza.
Zvakare pamwe neyaka nyowani uye yakavandudzwa yeCUPS yekudhinda system Neiyi nyowani "isina mutyairi" yekudhinda modhi, unogona kuprinta kune epfuura maprinta pasina kudiwa kweprinta madhiraivha.
Yakagadziridzwa Q4OS desktops
Nezve iyo desktop desktop iyi nyowani vhezheni yeQ4OS 3.8 inouya neiyo KDE Plasma 5.14 desktop.
Mune ino vhezheni nyowani yeKDE Plasma inosimbisa mitsva mitsva inosanganisira yekuratidzira marongero widget yekuratidzira manejimendi panguva dzekuratidzira, iyo yakavakirwa-mukati mutauri bvunzo basa mune odhiyo vhoriyamu widget, uye rutsigiro rweVPN SSH tunnels mune network network
Maitiro evashandisi anoshandura pakati peyavo yekutanga uye yechipiri yekutarisisa zvino yatsetseka muKDE Plasma 5.14, iyo inozopa inopa rutsigiro rwekunze aripo akavharirwa mafaira kubva kuPlasma Vault.
Zvimwe zvinowedzera zvinosanganisira zvirinani LibreOffice kuenderana kweTask Maneja, yekukiya mushandisi inoshandura kuitira zvirinani kuchengetedzeka uye nyore kushandisa, uye nyowani "Zvishandiso" menyu muSystem Monitor ine yakawanda yezvinhu zvinobatsira.
Iyo Plasma Discover mapakeji ekupedzisira akazotsigirwa pamwe nerutsigiro rweSnap chiteshi uye zvakasiyana-siyana zveUI, Kickoff app launcher yakagadziridzwa kuti ichinje pakarepo mabhii, iyo Breeze widget theme yakagamuchira zvakasiyana-siyana zvakavanzwa, Global Menu ikozvino inotsigira GTK + apps, uye Plasma ikozvino inokuzivisa iwe apo vamwe Vashandi pavanopinda kana vakaedza kubuda .
Pamusoro pezvo inowedzerawo imwe nhanho yezvikwidziridzo kutsigiro yaWayland nekugadzirisa nyaya dzakasiyana dziripo mushanduro dzekare, kusanganisira off-center task switch, pointer constraints, KWin mhedzisiro senge Idle Weak mhedzisiro uye Glide mhedzisiro, uye zvakare inopa rutsigiro rwekubatanidza zvimwe zvinoshandiswa nedesktop kuburikidza nemaviri matsva maficha anonzi XdgShell uye XdgOutput.
Utatu desktop 14.0.6
Kunze kwePlasma, iyo Utatu 14.0.6 nharaunda inowanikwa zvisingaite, kuenderera mberi nekuvandudzwa kweKDE 3.5.x uye Qt 3 kodhi yekodhi.
Chinhu chakakosha chekuparadzirwa kweQ4OS kugona kweiyo KDE Plasma nenzvimbo dzeUtatu kuti dzigare pamwe chete kana dzakaiswa panguva imwe chete.
Mushandisi anogona kuchinja pakati pazvino KDE Plasma desktop chero nguva uye nharaunda inoshanda-yeTrinity nharaunda.
Iyo sisitimu inosanganisira akati wandei ekushandisa maficha, kusanganisira iyo 'Desktop Profiler' yekumhanyisa kumisikidza kwetematic software suites, iyo 'Kugadziriswa Utility' yekumisikidza yechitatu-bato kunyorera, iyo 'Welcome Screen' kurerutsa kutanga kwekumisikidza, zvinyorwa zvekumisikidza dzimwe nharaunda LXQT, Xfce uye LXDE.
Dhawunirodha Q4OS 3.8
Kana iwe wanga uchifarira kugoverwa uku, unogona kuenda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekti uye muchikamu chayo chekurodha unogona kuwana iyo system mufananidzo.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ichi kuvhurwa unogona kubvunza chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo itsva vhezheni yeQ4OS 3.8 inosvika yakavakirwa paDebian 10 uye nezvimwe
Makore makumi mashanu ekuberekwa kwemunhu paMwedzi ...